बधाई ! बेलायती प्रहरीका सल्लाहकार बने नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत शिवजी श्रेष्ठ…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
बधाई ! बेलायती प्रहरीका सल्लाहकार बने नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत शिवजी श्रेष्ठ…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर ८, २०७७ सोमबार 3
बेलायत : बेलायतको नेपाली समुदायका अग्रज सामाजिक अभियन्ता शिवजी श्रेष्ठ बेलायती प्रहरीको क्षेत्रीय एड्भाइजरी बोर्डमा नियुक्त भएका छन् । बेलायती प्रहरीको ह्या’म्पशायर कन्सट्या’बुलरीको सल्लाहकार बोर्डमा आफूलाई नियुक्त गरिएको श्रेष्ठले जा’नकारी दिए ।
ह्याम्पबशायर कन्स’ट्याबुलरीको ‘फोर्स स्ट्याटेजिक इण्डि’पेन्डेन्ट एड्भाइजरी ग्रुप’ मा नियुक्त ८ सदस्यमध्ये श्रेष्ठ पनि एक छन् । श्रेष्ठलाई सल्लाहकार बोर्डमा नियुक्त गरिएको कुरा ह्या’म्प्सायर कन्स्टल्बुरीका असिस्टे’न्ट चिफ कन्स्टे’बल म्या’ग्गी ब्लिथले शिवजी श्रेष्ठलाई जानकारी गराएकी थिइन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी श्रेष्ठको व्यवसायिक पृष्ठभूमि र यहाँको स्थानीय समुदायमा उनको सक्रियताका आधारमा प्र’हरीकोे सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको उनले बताए ।
बोर्डमा श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका बैठक र अन्तरवार्ताहरुपछि उनलाई नियुक्ति दिइएको हो । त्यसक्रममा ह्या’म्पशायर कन्स’ट्याबुलरीका उच्च प्रहरी अधिकारीहरुसंगै बेलायत सरकारका पूर्व गृहमन्त्री समेतको सहभागितामा छलफलहरु गरिएका थिए । बोर्डमा सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त श्रेष्ठको कार्यकाल आउँदो वर्षको शुरुदेखि २ वर्ष रहनेछ ।
बेलायतमा नेपालीहरुको उल्लेख्य बसोबास रहेका अल्ड’रसट, फार्न’बरोदेखि हुक, बेजिं’गस्टोक, विन्चेस्टर, अल्टन, साउथह्या’म्पटन, पोर्ट’स्माउथ र आइल अफ ह्वाइटसम्मका क्षेत्र बेलायती प्रहरीको ह्याम्पशायर कन्स’ट्याबुलरीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न पृष्ठभूमिका समुदायहरु र प्रह’रीबीच समन्वय र सम्बन्ध सुदृ’ढिकरणका लागि यो एड्भाइ’जरी बोर्डले भूमि’का खेल्ने गर्छ ।
प्रहरीका गतिविधि र घ’टनाक्रमहरुलाई स्वत’न्त्रतापूर्वक समिक्षा गर्ने, त्यसप्रति आफ्नोे धा’रणाहरु दिने र समुदायको भावना एवम् आवश्यकतालाई प्रह’रीसम्म सञ्चार गर्ने काम बोर्डको हो । प्र’हरीले सञ्चालन गरेका विभिन्न घ’टनाहरुमाथिका प्रमुख अनुसन्धा’नहरुको मुल्यांकन गर्दै स्थानीय प्रहरीको नीति तथा योजना तर्जुमाका लागि समेत सु’झाव दिने काम सल्लाहकार बोर्डले गर्न सक्छ ।
बेलायती प्रहरीको क्षेत्रीय स्तरको सल्लाहकार बोर्डमा नेपाली समुदायबाट नियुक्त हुने सम्भवतः श्रेष्ठ नै पहिलो हुन् । ‘मैले यो जिम्मे’वारीलाई गौरवका रुपमा लिएको छु । हाम्रो सिंगो नेपाली समुदायकै प्रतिनिधिका रुपमा मलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको मैले ठानेको छु’, श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो समुदायको भावना र आवश्यकताको प्रति’निधित्व हुने गरी काम गर्ने मेरो अ’ठोट छ ।’
प्रह’रीमाथि लाग्ने जातीय भेदभा’व र शक्ति दुरुप’योगको आ’रोपलाई हटाउने दिशामा सक्दो योगदान गर्ने उनले बताए । नेपाल प्र’हरीका पूर्व डिएसपी श्रेष्ठ बेलायतको बेजिंग’स्टोक मल्टकि’ल्चर फोरममा हाल अध्यक्ष छन् । विश्वका २७ देशबाट आएका करिब ८० वटा समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको फोरममा केहि महिनाअघि उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् ।
लेबर पार्टीको बेजिं’गस्टोक कार्यसमितिका सदस्य श्रेष्ठ अश्वेत, एशियन तथा अल्पसंख्यक समुदाय हेर्ने विभागका संयोजक हुन् । स्थानीय क्र’यामबोर्न कलेजमा उनी गभ’र्नर पनि छन् । बेलायतको स्थानीय समुदायसंग निकट रहेर सामाजिक कामहरु गर्दै आएका श्रेष्ठ यहाँको नेपाली समुदायमा पनि उत्तिकै क्रिया’शिल छन् । -हाम्राकुरा
Prevनक्सा आयो पढ्न नपाइने , रेल आयो चढन नपाइने , कस्तो खालको विकास ?
Nextन्यूज २४ को कार्यक्रम कल २४ को प्र’भाव, मो’र्गन कलेजले थु’नाएको तीन विद्यार्थी छुटे…हेर्नुहोस् ।
टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा हजार छक्का र हजार चौका हान्ने पहिलो खेलाडी बने युनिभर्स बोस’ क्रिस गेल !
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1362)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1362)